Musharax Daahir Geelle “Nolosha siyaasadeed xildhibaannimo oo kaliya ma ahan” | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Musharax Daahir Geelle “Nolosha siyaasadeed xildhibaannimo oo kaliya ma ahan”
Musharax Daahir Geelle “Nolosha siyaasadeed xildhibaannimo oo kaliya ma ahan”
written by warsan radio 08/03/2022
Musharax Madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle ayaa farriin u diray qaar ka mid ah xildhibaanadii golaha Shacabka ee dhawaan waayay kuraastii ay ku fadhiyeen.
Musharax Daahir Geelle ayaa sheegay in aysan aheyn dhamaadka mustaqbalkooda Siyaasadeed.
Qoraal uu soo saaray ayaa siddaan u qornaa.
Nolosha siyaasadeed xildhibaannimo oo kaliya ma ahan!
Siyaasiga oo xildhibaannimo waaya, kama dhigna in uu saaxada siyaasadeed ka baxay, in uu xildhibaan noqdana kama dhigna in uu siyaasadda guul ka gaaray. Cabbirka guusha iyo guuldarrada siyaasiga waa meelmarinta aragti siyaasadeed iyo xaqiijinta dan guud. Xildhibaannimada waa hab kamid ah hababka siyaasadda looga shaqeeyo, ee ma ahan habka kaliya ee jira, xilalka siyaasadeed way badan yihiin.
Siyaasiga kursiga xildhibaannimo waayay waxaa horyaalla fursado kale oo badan, sidaas awgeed waa in uusan ku mashquulin ka aargudashada xildhibaanka kursiga ka helay iyo dadki garab siiyay. Sidoo kale, xildhibaanka kursiga Alle u calfay, waa in uusan ku mashquulin iska ilaalinta siyaasiga uu kursiga ka helay iyo dadki garab taagnaa ee waa in uu doono, la fariisto oo wixi dhacay ka dhaqo.
Waa in aan ku dhiiranno in aan wixi dhacay ka gudubno, una midoowno isbaddalka ay dadka Soomaaliyeed naga sugayaan. Shaqada ugu wayn ee maanta noo taalla waa samatabixinta dadkeenna iyo dalkeenna oo xelli adag ku jira.
Musharax Daahir Geelle “Nolosha siyaasadeed xildhibaannimo oo kaliya ma ahan” was last modified: March 8th, 2022 by warsan radio
Dhageyso:-Warka Caawa Radio Warsan
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo la kulmay Wakiilo ka tirsan Beesha Caalamka
Mareykanka oo taageeray go’aankii Midowga Afrika
Ciidamada Israa’iil oo Duqeeymo ka geeystay Marinka Gaza
Maamulka Hir-Shabeelle oo shaaciyay jadwalka doorashada laba kursii ay qaban doonaan
Dhageyso+Sawiro:-Madaxweynaha DGKGS Mudan C/Casiis xasan Mohamed Lafta gareen ayaa Maanta Si rasmi ah u la wareegay Xilka Madaxweynimo
Turkiga oo xabsiga u taxaabay saraakiil howlgab ah